Mpampindram-bola madinika: maro ny vola tsy tafaverina - ewa.mg
Mpampindram-bola madinika: maro ny vola tsy tafaverina
News - Mpampindram-bola madinika: maro ny vola tsy tafaverina
Miangavy ny fanjakana hijery ny
olana sedrain’ireo mpampindram-bola madinika ny APIMF*. Mandalo
fotoan-tsarotra, ankehitriny, ireo mpampindram-bola madinika ireo,
toy ny sehatra hafa rehetra, noho ny valanaretina Covid-19. Ambany
ny famerenam-bola, maro ny vola nampindramina tsy tafaverina.
Notsiahivin’ny APIMF ny anjara toeran’izy ireo eo amin’ny
fihariana, mifampiraharaha amina olona 1 500 000. Maro
anisa indrindra ny mivelona amin’ny fambolena sy ny fiompiana any
ambanivohitra, mahatratra 75 %. Midika izany fa maro anisa ny miasa
tena ivelan’ny sehatra ara-dalàna. Maro koa ireo mpivarotra entana
ilaina andavanandro, saika hita amin’ny tanàn-dehibe.
Ankoatra ny renivola, misy ny
zanabola tsy voaloa. Nohararaotin’ny sasany ny fahazoana nampiato
ny famerenam-bola tao anatin’ny fihibohana. Ho an’ny Otiv Tana,
ohatra, nantsoina ireo mpanjifa, nohamarinina ny fangatahany
fanemoram-potoana. Rariny raha aloa ny zanabola mifandraika amin’ny
fotoana tsy nahafahana namerim-bola. Na izany aza, misy ireo afaka
Manaitra ny fanjakana ny APIMF fa
iankinan’ny fiveloman’ny maro ny asan’izy ireo. Afaka roa volana,
hisokatra ny taom-pambolena manaraka, ka mila vola hiatrehana
izany. Miankina amin’ny fanampiana ity fandraharahana ity ny
ahafahana manohana ny tontolo ambanivohitra, mampiditra azy ireny
anatin’ny ara-dalàna, mampihodina ny toekarena.
APIMF* : Association professionnelle des institutions de
L’article Mpampindram-bola madinika: maro ny vola tsy tafaverina a été récupéré chez Newsmada.
Fomba fiteny toa efa mahazatra ny Malagasy, saingy mifono zava-dalina rehefa dinihina akaiky satria ny andavanandrom-piainana mihitsy no voalaza ao anatin’izany. Harena goavana be ny velaran’i Madagasikara raha oharina amin’ny mponina ao aminy. Firy amin’ny Malagasy anefa ny manan-tany? Sarotra, faran’izay sarotra ny mangataka tanim-panjakana. Vola sy fotoana lany, manginy fotsiny. Fambolena sy fiompiana, ireo ny harena eo amin’ny Malagasy.Tsy nisaraka tamin’ny tany izy fa nosarahina tamin’ny tany… Nidiran’ny mpanjakazaka an-tanin’olona ny taniny. Aty aoriana, nanjakan’ny dahalo ny fananany. Niala tsy fidiny teo amin’ny tany nohajariny izy. Hatreto anefa, ampahany kely dia kely amin’izany tany izany ihany no voaverina eo aminy.Raha tena tiana marina ny hampandroso an’i Madagasikara sy ny Malagasy, mila jerena manokana ny momba io tranga io. Maninona ny Malagasy no mifanaritaka sy miady mifamono noho ny raharahan-tany? Misy antony ao! Fa maninona ny Malagasy tsirairay no tsy manana tany kanefa i Madagasikara, malalaka be? Misy antony ao!… Mila hanaovana ezaka manokana ny hananan’ny Malagasy tany. Mitaky fanamorana izany. Fikarakarana ny taratasy, ny sarany aloa, ny fepetra arahina, sns, hamboarina avokoa ny lalàna mifandraika amin’ireo. Tsy zava-baovao ny fanomezana tany ho an’ny olona tsirairay fa efa nisy fony fahampanjaka satria « tsy manam-pahavalo afa-tsy ny mosary aho », hoy Andrianampoinimerina.Raha omena ny Malagasy ny tany. Omena azy ny fitaovana hoenti-mamboly. Omena azy ny masomboly. Omena azy ny tsena hivarotana ny vokatra, sns. Anjaran’ny fanjakana ny mandrindra ny fanatanterahana ireo amin’ny ankapobeny. Ho Nosy sambatra tokoa i Madagasikara atsy ho atsy!HaRy RazafindrakotoL’article Mpanan-karena mahantra! a été récupéré chez Newsmada.
Firongatry ny valanaretina : olona enina indray matin’ ny Covid-19, miisa 360 ireo tranga vaovao
Tsy mitsahatra mirongatra ny valanaretina. Namono olo­na enina indray ny oronavirus, omaly araka ny tatitry ny CCO. Tetsy Befelatanana ny efatra raha iray avy ny teny amin’ny HJRA sy ny eny Fenoarivo. Ambony io antontanisa io raha telo ihany izany isan’andro tato ho ato. Ani­san’ny ambony indrindra kosa ny isan’ireo lavon’ny Corona­virus ny 16 jolay lasa teo.Miisa 76 ireo lavon’ny Covid-19Nahatratra 10 ireo namoy ny ainy ary nahatratra 484 ireo nifindran’ny valanaretina. Ta­fakatra 76 izany izao ireo matin’ny Coronavirus hatramin’izao. Etsy andaniny, miisa 360 ireo tranga vaovao ka avy eto Analamanga ny 321 amin’izany. Ahitana 14 Mahajanga, faritra Boeny, raha 11 any Fianarantsoa, Matsiatra Am­bony. Miisa dimy ny any Itasy ary telo ny any Atsimo Andrefana. Miisa telo ireo nifindran’ny valanaretina any Sofia, mitsinjara ho iray avy ny any Mandritsara sy any Antsohihy ary any Port Bergé. Roa ny tany Toamasina, Atsi­nanana ary iray tsy voafaritra.Maro anisa amin’ireo marary mafy, eto Analamanga avokoaAnkoatra izany, miisa 87 ireo marary mafy «forme grave» ka maro anisa amin’ireo, 79, avy eto Analamanga avokoa. Mitsinjara ho 41 ny etsy Befelatanana raha 18 eny amin’ny HJRA. Miisa fito ireo marary mafy eny amin’ny Homi Soavinandriana ary enina ny eny Anosiala. Ahitana «forme grave» iray eny Anosy Avaratra miampy ireo roa eny Fenoarivo ary efatra etsy Andohatapenaka. Na izany aza, miisa 362 ireo sitrana ka tafakatra 5 522 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana. 8 741 ireo nifindran’ny valanaretina Co­ronavirus hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Mbola manaraka fitsaboana sy arahi-maso ny 3 143 ary miisa 36 773 ireo fitiliana vita.Synèse R.L’article Firongatry ny valanaretina : olona enina indray matin’ ny Covid-19, miisa 360 ireo tranga vaovao a été récupéré chez Newsmada.
Lounge Feeling: hanafana ny sehatra ry Benny…
Sehatra iray manome lanja sy tombony manokana ny mozika malagasy ny Lounge Feeling eny Ambohimangakely. Izay, rahateo, no mampiavaka azy amin’ireo toeram-pilanonana hafa eto an-dRenivohitra sy ny manodidina. Ho fanohizana izany, hampiaka-tsehatra mpanakanto efatra, mpiray donak’afo hatry ny ela ary samy tsy zovina amin’ny maro intsony, ity toerana ity, anio hariva.Tsy iza izy ireo fa i Benny sy i Bebey ary i Sammy sy i Nini, hitondra ny revy Lôlô sy ny tariny, amin’io fotoana io. Mampanakaiky kokoa ny mpankafy amin’ny mpanakanto tiany ny Lounge Feeling. Noho izany, tsy hijanona ho an’izy efatra mirahalahy irery ny sehatra fa hisy ny ampaham-potoana ahafahan’ny mpanotrona miara-mihira amin’izy ireo, araka ny fanazavan’i Soatina, tompon’andraikitra amin’ny fikarakarana ny hetsika.Raha tsiahivina, nisantatra ny seho tao amin’ity toerana ity, tamin’ny fotoana nanokafana azy, ny Mivazo sy Mananara, tarika vao misandratra eo amin’ny tontolon’ny mozika malagasy, saingy tsy vahiny amin’ny sofin’ny maro intsony ary nitondra fahafaham-po ireo nanatrika ny fampisehoana.Nandimby azy ireo ry Levelo, izay efa manana ny maha izy azy hatry ny taona ela, saingy mbola tsy mety lefy laza sy ankafizin’ny taranaka mifandimby.Landy R. L’article Lounge Feeling: hanafana ny sehatra ry Benny… a été récupéré chez Newsmada.
Gadon-kira vaovao – Romeo 3.0 : hivoaka amin’ ny herinandro ny «Jaolahy Be»
Hiparitaka amin’iny herinandro ambony iny ny rindrantsary (clip) mitondra ny lohateny “Jaolahy be”. Vo­ka­tra vaovao an’i Romeo 3.0 izy ity. Anisan’ny ahitana izany ny ao amin’ny tambajotran-tserasera “facebook” sy ny “youtube”. Ezahina ny hanaparitahana ny vokatra amina haino aman-jery ho fa­nomezana fahafaham-po ny mpankafy mozika malagasy, araka ny nambarany. Miavaka, araka izany, koa ny sanganasa homena ny re­he­tra satria gadona J-Bal­vin & Wizkid, mbola vitsy mpanao eto Madagasikara izany nefa manana ny hanitra ho azy, araka ny fanazavany hatrany. Anisan’ny ny tena nahafantarana an’i Romeo 3.0 ny afrobet sy ny mozika tropikaly… Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoany amin’ izao ny fiketrehana ny rakitsary hahitana rindrantsary fo­lo eo ho eo ao anatiny, ra­ha ny nambarany hatrany. Ra­ha tsy misy ny fiovana, hanohy ny fiakarana an-tsehatra miaraka amina mpanakanto hafa toa an-dry Arth, i Lawout, i Ghotta, i Emci, i Jinn’s, i Jean Marc, i Mc Rami, i Jo Joly, i Allex sy ireo maro hafa i Romeo 3.0. Marihina fa eo am-pitadiavana ny mpikarakara na ny “manager” ho azy manokana ny tenany ary vonona ho amin’ny fiaraha-miasa rehetra.NarilalaL’article Gadon-kira vaovao – Romeo 3.0 : hivoaka amin’ ny herinandro ny «Jaolahy Be» a été récupéré chez Newsmada.
Nitombo 1992 ny isan’ny efitrano fanadinana: tsy mihoatra ny 50 ny mpiadina iray efitra amin’ny BEPC
Tsy mahazo mihoatra ny 50 ny isan’ny mpiadina anatin’ny efitrano fanadinana iray ho an’ny BEPC, ary nampitomboina 12 noho izany ny foibem-panadinana ary 1992 ny efitrano handraisana ny fanadinana amin’ity taona ity, araka ny fanazavan’ny minisitry ny Fanabeazana, i Sahondrarimlala Marie Michelle. Efa notsinjaraina isaky ny faritra ny fitaovana arotava sy ny gel ho an’ny foibem-panadinana ho an’ny mpiadina sy ny mpiasa rehetra mampihodina ny fanadinana BEPC. Tokony ho afaka miatrika ny fanadinana avokoa ireo rehetra voasoratra anatin’ny lisitra ary ny taratasy fiantsoana tsy azon’ny talen-tsekoly giazana fa azo vahana ny olana aorian’ny fanadinana. Nitaraina anefa ny tompon’ny sekoly tsy miankina fa lasa manararaotra ny ray aman-dreny ka manery ny tale hanome ny taratasy fiantsoana ho an’ny zanany na tsy nahaloa ny saram-pianarana volana maro aza. Tsy mandalo eny amin’ny sekoly intsony izy ireo manefa ny trosa aorian’ny fivalian’ny fanadinana ka lasa mibaby vesatra ny tompon-tsekoly. Ny minisitera mpiahy koa tsy manome na tohana kely aza tao anatin’ny fihibohana ho an’ny mpampianatra amin’ny sekoly tsy miankina, hoy ny tale nasionalin’ny sekoly miahy tena Association des instituts laïques pour l’éducation (AILE), Rakotomalala Célin. Nohamafisiny fa lasa miady irery ny sekoly tsy miankina ary tsy vitsy no nampiato ny asany ka tsy handray mpianatra intsony.Hiatrika ny taranja Malagasy sy ny tenim-pirenena hafa ho an’ny mpiadina tsy manao malagasy ny tapany maraina, hitohy amin’ny SVT ny hariva. Mbola haharitra hefarana ny BEPC.Vonjy A. L’article Nitombo 1992 ny isan’ny efitrano fanadinana: tsy mihoatra ny 50 ny mpiadina iray efitra amin’ny BEPC a été récupéré chez Newsmada.